XOG: Qoorqoor, Guudlaawe iyo Lafta-gareen oo ka caga jiidaya fulinta dalab kaga yimid Villa Somalia
January 30, 2021 Xuseen 3
Puntlandtimes (Muqdisho)-Maamulada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka caga jiidaya fulinta awaamiir kaga timid madaxda ugu sarraysa dowladda federalka ah ee Soomaaliya kuna aadan arrimaha doorashada.
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo fulinaya go’aamada Villa Somalia ee ku wajahan qabashada doorashooyinka dalka ayaa u sheegay madaxda maamulada inay ka shaqeeyaan qabashada doorashada xildhibaanada labada aqal ee barlamaanka Soomaaliya.
Madaxweynayaasha kala ah Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, Cali Guudlaawe iyo Madaxweyne Lafta-gareen ayaaa lagu wargeliyey inay dhaqangeliyaan go’aamada xukuumadda ee ku wajahan qabashada doorashada xildhibaanada labada aqal oo weli lagu muransan yahay.
Madaxda saddexda maamul oo heshiis dhow la ah Villa Somalia ayaa ka caga jiidaya qabashada doorashada xildhibaanada aqalka sare oo lagula balamay inay ka bilaabaan caasimadaha maamuladaasi kahor inta aan heshiis ah laga gaarin doorashada.
Hoggaamiyayaasha maamuladaasi oo cadaadis kala kulmay musharixiinta mucaaradka ah iyo beesha caalamka ayaan weli soo gudbin liiska musharixiinta u taagan kuraasta xildhibaanada aqalka sare barlamaanka federalka aj ee Soomaaliya.
Caga-jiidka saddexda maamul ayaa caqabad ku noqday madaxtooyada Soomaaliya oo doonaysay in doorashada la bilaabo si ay ugu fududaato in madaxda Puntland iyo Jubbaland loogu dirqiyo qabashada doorashada oo ay siweyn uga horyimaadeen.
James Swan ayaa tagay Baydhabo, Dhuusamareeb iyo Jowhar oo ammar dul dhigay in aay nan sameyn doorasho aan loo dhameyn.
Farmaajo iyo Raysul Wasaarihiisa war uma yaal mushaarkooda ha iska qaataan.
Ini fargaajo albaabadu waa ka xirmeen saacadiina waa ku yeertay talo iyo tusaale la waydiinmaayo ma leh boorsooyinkiisa hal haleel haku haahaabto villa wardhiigley na howga baxo. Qofkaan dabaal aqoon marka uu badwaynta galo sidaas Farmaajo ayuu ku haftaa. Waxaa mahad leh madaxda ruugcadaaga ah ee Puntland iyo Jubaland oo qoolka eeyga ini fargaajo qoorta uga xiray.
Waxaa igu maqaale ah inuu Xalane meel ka diyaarsaday ninkaan meel uma socdo waa dhibaato hor leh oo somali kuso korortay waa nin qaba inuu soo celiyo xukunkii kaligii taliska ahaa ee uu kusoo koray we siyaadbare ee ahaa kala qaybi oo xukun.lakiin Reer barigu waxay yiraahdaan (AA LA TAHAY BOOWE)